Shaki laga qabo Geerida Cali Khaliif Galeyr iyo Baaritaan la dalbaday | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Shaki laga qabo Geerida Cali Khaliif Galeyr iyo Baaritaan la...
Shaki laga qabo Geerida Cali Khaliif Galeyr iyo Baaritaan la dalbaday
Waxaa shalay magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr, oo kahor geeridiisa la sheegay in uusan qabin xanuuno horey loo ogaa.
Wasaarada Caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr u geeriyooday cudurka Caronavirus, hasa ahaatee waxaa warkaasi shaki ka muujiyay ehelada Cali Khaliif.
Qaar kamid ah Ehelada Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa codsaday in dib loo dhigo aaska marxuumka, waxa ayna codsadeen in baaritaano rasmi ah lagu sameeyo waxa keenay geeridiisa.
“Anaga ayaa codsaneyna in naloo baaro. Baaritaanka dambe waxaa lagu sameynayaa meeshii la isla qaata ama meesha loo qaadayo ee lagu aasayo ee macquulka noqota, Marxuumka Calooshaa laga qabtay, wuu shubmay wuu fuuq baxay. Isaga ayaa inoo sheegay. ‘Cuntadaas is dhaaftay ayaan u maleynayaa sababta xanuunka’, ayuu nagu yiri. Cuntadan maxay sii tahay? xaggee ka cunay? arrintaa ma aanan gelin marka arrin fudud ayaan iska moodeynay markii hore, waxaana is laheyn wuu iska dhammaani.”ayuu yiri Mukhtaar Xaamud oo kamid ah ehelada Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Allaha u naxariistee Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr ayaa baaritaanada lagu sameenayo meydkiisa kadib ayaa la filayaa in loo soo qaado magaalada Muqdisho si loogu aaso.
Dowlada Soomaaliya ayaa guddi Wasiiro u badan u saartay qaban qaabada aas Qaran oo magaalada Muqdisho loogu sameenayo Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr oo shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga.
Previous articleShaqaalo badan oo la Ruqseynaayo Magaalada Muqdusho
Next articleShacabka magaalada Muqdisho oo Cabsi la soo daristay
Shacabka magaalada Muqdisho oo Cabsi la soo daristay
INDIA: Wasiirad u geeriyootay cudurka Covid 19